Dredge Waxaa loo Adeegsaday Inuu Dayactiro Wabiga Jhelum & Ka Hortagga Fatahaada Kashmir
Dooxada Badbaadinta ee Jhelum: Fatahaadaha: Govt
In kabadan 50 sano kadib, astaanta Ellicott® ee asalka ah ee loo yaqaan 'Jhelum conservation dredge' waxay lashaqeysaa qaab hadda jira.
Source: Kashmir weyn waxaa qoray Arif Shafi Wani
'Qodida Joogtada ah ayaa Kordhiyay Awoodda Fiditaanka Wabiga'
In ka badan 50 sano kadib, astaanta Ellicott® ee asalka ah ee loo yaqaan 'Jhelum conservation dredge' waxay la shaqeysaa qaab hadda jira.
Srinagar, Sep 16: Mashruuc himilo badan leh oo lagu badbaadinayo wabiga noloshiisa ee Kashmir Jhelum ayaa bilaabay inuu soo saaro natiijooyin wax ku ool ah iyadoo dowlada Jammu iyo Kashmir ay ku adkeysanayaan in halista daadadka ee ay sababeen roobabkii ugu dambeeyay ee aan kala go’a laheyn ay hoos u dhacday sababo la xiriira tallaabooyinka ilaalinta wabiga ee waqooyiga Kashmir
Jhelum oo ah isha isha ugu weyn ee waraabka dooxada waxaa ku fatahay gogol dhaaf ballaaran sannadihii ugu dambeeyay. Maqnaanshaha tallaabo kasta oo ilaalin ah, webiga ayaa lumiyay awooddiisa qaadista waxayna horseedday in la xiro khadkii wabiga ee ay ka heli jireen Baramulla, oo halis ugu jira fatahaada Wabiga.
Waxbadan ka baro Kala Bixinta Wabiga
Shaqooyinka dhowrista ee ka socda Jhelum ee degmada Baramulla waa lagu guuleystey maadaama aan ka leexan karno halista ugu dambeysay ee daadadka. Qodista joogtada ah, waxaan ka qaadnay xannibaadaha webiga ee Baramulla waxaana si aad ah u kordhinnay awoodda qulqulka webiga, ”Taj Mohi-ud-Din, Wasiirka Waraabka iyo Xakamaynta Fatahadu wuxuu u sheegay Greater Kashmir.
Asal ahaan waxay ka timid Verinag oo ku taal koonfurta Kashmir, Jhelum waxaa ku soo biiray afar tog, Surendran, Brang, Arapath iyo Lidder oo ku yaal koonfurta Kashmir's Islamabad (Anantnag). Ka sokow, durdurrada yaryar sida Veshara iyo Rambiara sidoo kale waxay webiga ku quudiyaan biyo macaan.
Jhelum wuxuu ku socdaa jidka abeesada ee Koonfurta ilaa Waqooyiga Kashmir wuxuuna degaa Wullar, oo ah harada ugu weyn ee Aasiya, ka hor inta uusan ku shuban Pakistan oo laga maamulo Kashmir ilaa Baramulla. Khubaradu waxay sheegeen in daadadkii waxyeellada lahaa ee 1959 ay saameyn ku yeesheen Jhelum sababo la xiriira daadad hoose oo ka soo baxay Wullar Lake ee woqooyiga Kashmir taas oo ku dhowaad ceejisay isku-uruurinta culus ee dariiqa iyo kanaalka qulqulka.
“Waxaan ka saarnay tanno dhoobo ah kanaalka qulqulka. Mashruuca Ilaalinta Jhelum waa mid iskiis u taagan maaddaama iibinta dhoobada ay dowladda ka keentay rupees laba crores bilihii la soo dhaafay. Waxaan lacagtaas ugu isticmaali doonnaa ilaalinta muddada dheer ee wabiga, ”ayuu yiri Taj oo intaas ku daray in labada qod ee ay Mareykanku soo farsameeyeen ay soo dedejiyeen hannaanka ilaalinta.
Qodaalka waxaa soo saaray shirkadda Ellicott Dredges ee fadhigeedu yahay Mareykanka - oo ah mid ka mid ah soo saarayaasha ugu da'da weyn qalabka qodista. Dhacdadu waxay tahay, Ellicott Dredges wuxuu keenay ceelkii ugu horreeyay ee Ellicott® ee loogu talagalay ilaalinta Jhelum 1960. Dredger-ka waxaa howl galiyay Ra'iisul Wasaarihii xilligaas Jawahar Lal Nehru.
Waxaa lagu iibsaday qiime dhan Rs 12 crores, dredgers-yada loo yaqaan Soya II iyo Budshah II waxaa loogu talagalay inay kudhasho qoto dheer. Aijaz Rasool oo ah wakiilka KEC Mumbai ee Ellicott Dredges ee India ayaa sheegay in howlgalka burburka uu si joogto ah ugu socdo Janbazpora iyo Juhama ee Baramulla.
Qodista joogtada ah ee goobahan, waxaan ka baxsan karnaa boqollaalka jeer ee daadadka Dooxada. Laakiin tani suuro gal ma ahayn qashin qublayaashii, ”ayuu raaciyay.
Saraakiisha ayaa sheegay in Raiisel Wasaarihii Jammu iyo Kashmir Bakshi Ghulam Muxammad dabayaaqadii 50-meeyadii ay la xiriireen Dowlada Hindiya si ay u raadsadaan la-talin khabiir ah iyo xalinta injineernimada dhibaatada. Iyadoo la raacayo hagista khubarada Guddiga Dhexe ee Biyaha, waxaa la diyaariyey Qorshe guud oo lagu qodayo shaqooyinka Jhelum laga soo bilaabo Wullar ilaa Khadanyar.
Mashruucu wuxuu saadaaliyay in qotada dheer iyo balaadhinta Jhelum laga bilaabo Ningli ilaa Sheeri laga bilaabo farsamada gacanta. Si kastaba ha noqotee, wakhtigaas, haamaha wax soo saarkooda kuma soo saarin ama si fudud looga heli karin Hindiya. Saraakiisha waxay sheegeen inay ugu wacan tahay fara gelin shaqsiyadeed oo Raiisel wasaaraha markaas Jawahar Lal Nehru in la iibsado alaabada.
“Si kastaba ha noqotee, hawlgalkii qodaalka ayaa sii socday oo keliya illaa 1986. Waxaa loo hakiyay dhaqaale yari iyo tas-hiilaad la’aan. Tan iyo markaa tan oo qashin ah ayaa ka dhacday Jhelum sababtoo ah xaaluf deg deg ah oo ku yimid biya qabadkeedii. Tani waxay hoos u dhigtay waxqabadka dariiqa marinka Jhelum ee qulqulka iyo xamuulkeeda oo qaadaya 35000 cusecik sanadkii 1975 ilaa iyo 20000 cusecs waqtigan, ”ayay saraakiishu sheegeen.
Waaxda waraabka iyo xakamaynta daadadka waxay sanadkii 2009 u dirtay wasaarada khayraadka biyaha mashruuca Rs 2000 crore. Mashruucu wuxuu ka koobnaa shaqooyin badan oo dib u soo celin ah oo ay ka mid yihiin hagaajinta Jhelum ee qodaya wadiiqooyinka kanaalka, ilaalinta, iyo ka hortagga nabaad-guurka iyo kordhinta waxtarka hidaha.
Si kastaba ha noqotee, Wasaaraddu waxay oggolaatay oo keliya qayb ka mid ah mashruuca ku kacaya Rs 97 crores si loo fududeeyo waxqabadyada degdegga ah oo ay ka mid yihiin soo iibinta mashiinnada iyo qodidda Jhelum, gaar ahaan marinnada daadadka ee Srinagar iyo qulqulka daadadka ee Daubgah iyo Ningli ee Baramulla. Taj ayaa sheegtay in dhammaan xogta la xiriirta cabbitaanka iyo ka-qaadista heerarka biyaha, qiyaasta daadadka iyo awoodda qaadista Jhelum ee 50-kii sano ee la soo dhaafay la dhigay dijital.
Waxaan sidoo kale qaadnay qashin qubista wadiiqooyinka daadadka ee Srinagar iyo meelaha ku teedsan ka sokow waxaan ka bilownay duulimaad ka socda Sonwar ilaa Old City. Ka dib markii la dhammeeyo qodista, waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan ka saarno dhammaan ku soo xadgudubka hareeraha webiga min Islamabad ilaa Baramulla. Sannado yar gudahood, Jhelum waxaa lagu soo celin doonaa quruxdeedii hore, ”ayuu Taj ku daray.
Waxaa dib looga daabacay Greater Kashmir